Ushaywe waphonswa ehlathini e-Copesville | News24
Ushaywe waphonswa ehlathini e-Copesville
UMnuz Wandile Ndlela ngemuva kokushaywa aphonswe ehlathini elise-Copesville.ISITHOMBE: sithunyelwe
UMNDENI wesilisa waseNorthdale oshaywe wabe esephonswa ehlathini elise-Copesville uthi ubonga iNkosi ngokuthi bethole indodana yabo isaphila.
UMnuz Wandile Ndlela (25) kuthiwa waxabana neqeqebana labafana eNorthdale ngeSonto eledlule mhla ka-3 kuNhlangulana (June) nokwaholela ekutheni bamushaye baze bayomulahla ehlathini.
Ngokuthola kwe-Echo ngelinye ilungu lomndeni elingathandanga kudalulwe igama lalo lithe, uMnuz Ndlela wanquma ukuba ahambe aye e-Copesville ngemuva kwale ngxabano ngalo iSonto ngoba ethi ubalekela ‘ukukhuluma’.
Lithe wafonela umngani wakhe wamubikela ngosekwenzekile wabe esemutshela ukuthi uzofika azomuvakashela ekhaya lakhe e-Copesville kuze kube kudamba isimo lapho ehlala khona.
“Ngokuchaza kwakhe uthi labafana ayexabene nabo bamulandela ngezimoto ngesikhathi ehamba eya kubo kamngani wakhe. Uthe ngesikhathi ehla ekhumbini laba bafana babe sebeza kuyena bamudonsa bamushaya baqede bamuphonsa ehlathini elikhona e-Copesville. Samufuna ubusuku bonke ngesonto singamtholi ngemuva kokubona ukuthi sekuhambe isikhathi eside engabuyi ekhaya. Saze samthola ngoMsombuluko ekuseni equlekile emgwaqeni omkhulu ngakhona e-Copesville. Siyasola ukuthi babezitshela ukuthi bamushaye bamubulala noma babezitshela ukuthi uzoshona,” kubeka yena.
Uqhube wathi bengumndeni bahlalele ovalweni ukuthi laba bafana bangase babuye bazoqedela into abayiqalile njengoba kuthiwa sebeke babonakala bezungeza umuzi befuna yena uWandile kungakapheli ngisho usuku nje etholakele.
“NgoMsombuluko samuthatha uWandile samusa ekhaya sayomulungiselela ukuthi simuhambise esibhedlela kodwa sathi uma siphuma esangweni kwafika omunye wabafana owasitshela ukuthi singabe sisaphuma ngoba abafana laba abashaye uWandile bakhona ngaphandle bathi bafuna ukuzomuqedela. Sazama ukuhlala kancane kodwa sabuye sabona ukuthi ayikho into esiyihlalele saqunga isibindi saphuma samuhambisa esibhedlela. Sasizimisele ngokuthi uma siphuma esibhedlela siya esiteshini samaphoyisa i-Mountain Rise siyovula icala kodwa sagcina sesichitha usuku nobusuku bonke esibhedlela.
“Sathi sisahleli kwavele kwafika amaphoyisa athi azobopha uWandile ngoba kukhona abafana asebemvulele icala. Sabachazela ukuthi uyena oshayiwe kodwa bathi abanandaba nalokho akahambe naye ayovula icala. Bamulinda esibhedlela bahamba bayomuvalela enjalo esezinhlungwini ekhala.”
Uthe uWandile ube esevela enkantolo ngoLwesine nalapho ekade ebhekene khona necala lokushaya kodwa wadedelwa ngebheyili.
Uthe namanje bahlalele ovalweni njengoba kungenzeka umuzi wabo uhlaselwe yilabo abafuna ukuqedela uWandile.
“Sihleli naye ekhaya ngoba akukho lapho esizo muyisa khona futhi sifuna ukumusiza ngesikhathi elulama, kodwa ukukhuluma iqiniso asizizwa siphephile futhi sibona sengathi umthetho usilahlile.”